Iwe unogona kundiudza pamusoro pezvemashure endlink uye nzvimbo dzinowanikwa nzvimbo dzinobatanidza nazvo?
Ngatitarisei - kuva nejiji yepamusoro peji yewebsite yako kana bhulogi kuitira kuti zvizivikanwe uye zvinowanzotaurwa pamusoro pezvimwe zvinyorwa zvinozivikanwa neHigh PageRank ndiyo nzira yakanakisisa yokuwana iyo yakakodzerwa shure kweEOO. Nenzira iyo, haugoni kungofadza chinangwa chevateereri asi kukura simba rakasimba uye zita rechigadzirwa rebhizimisi rako - zvose mune rimwe chete. Zvakanaka, pasi apa ndichaenda kukubatsira kuti uwane zvakawanda pamusoro pezvemashure ekureruka uye nzvimbo dzepaiti dzinowanikwa mukugadzirwa kwehupenyu hwehupenyu.
Kuwanda VS. Unhu
Kana zvasvika pakubata SEO nenzira yakarurama, zvirongwa zvekugadzira mazano ehupenyu chete zvichaita nekuda kwewebsite yako. Kunze kwekuti iwe uchida kukuvadza iwe webhusaiti yako kana bhagirofambira mberi mune SEO panguva yakareba, pamwe chete nehutano hwako hwekutsvaga webhu, uye kutsvaga nzvimbo dzepamusoro pakurega kwenguva refu. Kushanda zvakaoma kuti uwane nepamusoro kumashure kubva panzvimbo dzepawetera nepamusoro wePR nepamusoro-soro, ita nechokwadi chekudzidzira kushandisa chero zvigadziriswa zvishandiso uye wakabhadhara chikwata chekuvakisa kana shanduko dzebasa. Chinhu chacho ndechokuti vazhinji vavo vari kushandiswa kuparadzaniswa, zvisizvo zvachose zvisingabatsiri kana nzvimbo dzakasvibiswa dzokubatanidza newe. Ichokwadi, ivo vari kunyanya kubata nezvinhu zvepabonde, zvakadai sekubhejera, upombwe uye mishonga yevasimende. Nenzira iyo, dzakawanda zvevaya vanobatanidza masangano ekuvakisa mazano haagoni kuita chero chinhu pamusoro pehupenyu SEO zvachose. Zvechokwadi, vanowanzoratidza kuti vanogona kungoisa webhusaiti yako kana blog kuburikidza nematoni e-low-quality automated links anouya muchizhinji kubva kune zvisizvo zvakashata zvakadaro, panzvimbo yekukupa zvimwe zvepamusoro zvakakonzera kumasikirwo kubva panzvimbo dzepawero neine simba rinotendwa.
Gadzira Indasitiri kana Niche-Relevant Relations
Imwe yenzira dzakanakisisa dzekutora masimba makuru kumashure Mujenya webhuta rewebhu kune webhusaiti yako kana bhulogi inovaka hukama hune humwe hwakanaka nemamwe mabhuku anoyemekedzwa ane simba rakakwirira rinoenderana nekambani yebhizimisi rako kana nhamba yemusika. Nenzira iyo, iwe uchawana ruzivo rwekugadzirisa backlinks, izvo zvingangodaro zvakakosha zvikuru uye zvine simba kudarika chero humwe humwe hwemashure kumashure uye nzvimbo dzemazita ekuita kuti kuve nekushambadzira kwechinangwa chekuvaka chikwata. Uyewo, iwe unogonawo kufunga kubvunzurudza mutungamiri wemabhizimisi anovimbwa kana kuti avo vanobhururuka zvikuru. Zvechokwadi, wakapiwa kuti iwe unoda uye wakagadzirira kubhadhara nguva yakakwana nekushingaira kwe "kuwana" kwakakodzerwa nekudzoka zvakare. Uye yeuka nezvenyaya yakasununguka kumashure - pakupedzisira, inogona kuva yakakosha kudarika vatungamiri - uye inogona "kuwanikwa" nechinyorwa chezvinhu zvako zvakagadziriswa, zvakadai semakiti ehupamhi kana vatenzi vakawanda vanoda.
Tsvaga Top Backlinks uye Sites Sites Kuti Uitwe na
Hapana chikonzero chekuti kune mararamiro akasiyana-siyana emagariro evanhu anoshandiswa nemhando dzakawanda uye mabhizimisi ekuvaka chiremera chavo uye kubata zvimwe zvakakosha kumashure panguva imwecheteyo. Asi ini pachedu ndinokurudzira kuumba nzvimbo yako iri paIndaneti zvikurukuru paGoogle Plus, Instagram, Facebook, uye Twitter. Kuita kudaro, usakanganwa kutarisa mabhizinesi emunharaunda uye makambani ane chokuita nekambani kuti uzadze zvose zvaunosangana nazvo deta yekugamuchira backlink inokosha mukudzoka. Pakupedzisira, iwe zviri nani kutanga nekuzadza peji yako yeGoogle Bhizinesi, uye uende mberi nekutsvaga kuti uwane mamwe makuru ehurukuro, zvinyorwa uye mabhizinesi ezvakakosha pane zvidzidzo zvehurukuro yako kana mushamba Source .